समाचार Archives - Enepal Serofero
तातो तेलमा शरीर डढेकी गैंडाकोटकी २२ महिने नाबालिकाको उपचार खर्च अभाव भएको पारिवारले जनाएको छ । भरतपुरस्थित नयाँ मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको सिम्रौन पौडेलको पैसा नहुँदा उपचारमा समस्या भएको हो । सिम्रौनकी आमा विष्णुमाया पौडेलले अहिलेसम्म ३ लाख खर्च भइसकेको बताउँदै अबको उपचार समस्या भएको बताइन् । कान्तिपुरसित पौडेलले भनिन्, ‘जुटेको पैसा र आफूसँग भएको सबै अस्पताललाई बुझाइसकियो अब गाह्रो भइसक्यो ।’ उनका अनुसार अस्पतालले अझै ३ हप्ता उपचारमा राख्नुपर्ने बताएको छ । गैंडाकोटको भृकुटीचोकमा ठेलागाडामा समसा व्यापार गर्दै आएकी पौडेलकी छोरी सिम्रौनको ६ दिनअघि समोसा पकाउन तताएको तेल पोखिएर अनुहारसहित शरीर डढेको छ । अहिले सिम्रौनको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गएको छ । बालिकाको उपचारका लागि आइतबार स्थानीय बासिन्दाले चन्दा संकलन गरेर ४१ हजार नगद सहयोग गरेका छन् । कावासोतीका एलएन दबाडीले घरदैलो गरेर ४
एजेन्सी- संसार कति सम्म स्वार्थी र निष्ठुरी छ भन्ने कुरा यी सरोजलाई सोध्नु होस्। छिमेकिहरु मलामी बन्न तयार नहुँदा मृत आमालाई साइकलमा राखेर एक्लै अन्त्यष्टि गर्ने सरोजको कहानीले जो-कोहिलाई पनि भावुक बनाइदिन सक्छ। १७ वर्षीय सरोज मृत आमाको शव साइकलमा राखेर अन्त्यष्टिको लागि एक्लै रवाना भैरहेको भिडियो सामाजिक संजालमा देखा परेको छ। छिमेकिहरुले सहयोग गर्न इन्कार गरेसँगै सरोजले शव राखिएको साइकल ५ किलोमिटर खालीखुट्टा ठेले। ५ किलोमिटर टाढा रहेको जङ्गलमा पुर्याएर सरोजले एक्लै खाल्डो खने। त्यहि आमालाई पुरेर अन्त्यष्टिको काम सकाए। यो भावुक घटना छिमेकि मुलुक भारतको रहेको छ। अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुका अनुसार घटना भारत ओडिशास्थित कर्लाब्हालीको रहेको छ। ७ वर्षमै आमा गुमाएका सरोज आमा बितेपछि अब टुहुरो भएका छन्। पानि लिन जाँदा लडेर ४५ वर्षीय आमाको मृत्यु हुँदा सरोज विछिप्त भए। आमाको अन्त्यष्टिमा
जनकपुरधाम, ५ माघ । प्रदेश नम्बर दुईमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण धनुषामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा ११ हजार भोल्टको नाङ्गो तारमा सटेर दुई जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा सिराहा घर भई हाल जनकपुरधाममा बस्दै आएका जगरनाथ साह र धनुषा मिथिलेश्वर मवाहीका परमेश्वर मण्डल रहेका छन् । मृतकहरु ज ८ प ७७०९ नम्बरको बुलेट मोटरसाइकलमा सवार रहेका थिए । विद्युतको ११ हजार भोल्टको नाङ्गो तार बाटोमा भएको बेला मोटरसाइकलको लेगार्र्ड त्यसमा टाँसिएर एकजनालाई करेन्ट लागेको थियो । उनलाई बचाउन जाँदा अर्का व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण यस भन्दा पहिला पनि यस्तो घटना भएका थिए । नाङ्गो तार जमिनमा खसेको गुनासो गर्दा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अटेरी गर्दा जमिनमा अलपत्र रुपमा तार खसेको थियो । मृतक
काठमाडौँ — राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै १६ औं अनसन बसिरहेका प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई इलामबाट नाइटभिजन हेलिकप्टरमा ल्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जको आईसियुमा भर्ना गरिएको छ। उनकाे उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसारडा. केसीकाेस्वास्थ्य स्थिर (स्टेवल) छ।निमोनियाको उपचार अन्तर्गत इलाममा चलाइएको एन्टिवायोटिक यहाँ पनि जारी छ। उनको छातीमा अलि–अलि दुखाई र चक्कर आउने समस्या समेत देखिएको छ। डा. केसीको मुटुको चाल इलाममा अस्थिर देखिए पनि काठमाडौ आएपछि अझैसम्म यो समस्या देखिएको छैन।उनको रगतमा बिभिन्न तत्वको कमी समेत देखिएको छ। छातीको समस्याका बारेमा बुझ्न एक्सरे समेत गरिएको छ। उनलाई शुक्रबार बिहान ४ बजे शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएकाे हाे। डा. केसीलाई बिहीबार राति नाइटभिजन हेलिकप्टरबाट काठमाडाै‌ं ल्याइएकाे हाे । From : Trivenionline.com
सांकेतिक तस्विर काठमाडौँ, आफ्नै शिशुलाई मारेर फालेको अभियोगमा प्रहरीले आज एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाण्डौँ महाबौद्धस्थित आफ्नै कोठामा यही माघ १ गते नवजात शिशु जन्माइ मारेर फरार हुँदै आएकी कपिलवस्तुकी मञ्जु चौधरीलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ । शिशुको शव पोष्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज राखिएको र घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै प्रहरीले तीन हजार लिटर घरेलु मदिरा र मदिरा बनाउन प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थ बरामद गरी नष्ट गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय फर्पिङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रबाट ५०० लिटर र महानगरीय प्रहरी प्रभाग साँखुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले काठमाडौँ शङ्खरापुर नगरपालिकाबाट ५०० लिटर तयारी मदिरा र दुई हजार लिटर कच्चापदार्थ बरामद गरी आज नष्ट गरेको जनाएको छ ।
काठमाडौँ- बिहीबार नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएपछि आन्तरिकतर्फको हवाई भाडा पनि घट्ने भएको छ। निगमले बिहीबार राति बाह्र बजेदेखि लागू हुनेगरी हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाएपछि हवाई भाडा पनि घट्ने भएको हो। पहिला १०४रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर पर्ने हवाई इन्धन अब भने १० रुपैयाँ घटेर ९४ रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने भएको छ। यससँगै शुक्रबार बसेको एयरलाइन्स अपरेटर एसोसियशन्स अफ् नेपालको बैठकको आन्तरिकतर्फको हवाई भाडा घटाउने निर्णय गरेको हो। काठमाण्डौबाट विभिन्न क्षेत्रको हवाई भाडा ९० रुपैयाँदेखि ४४० रुपैयाँसम्म घटाइएको एसोसियशन्सले जानकारी गराएको छ। मूल्य घटेपछि निर्धारण भएको आन्तरिकतर्फको हवाई भाडा निम्न उल्लेखित छ। माउण्टेन फ्लाइट ११,३०० रुपैयाँ काठमाण्डौ–पोखरा ५०५० रुपैयाँ काठमाण्डौ–भरतपुर ३६५० रुपैयाँ काठमाण्डौ–विराटनगर ७५५० रुपैयाँ काठमाण्डौ–जनकपुर ४३०० रुपैयाँ का
आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गर्ने एक पुरुषलाई डेनमार्कमा २ वर्ष ६ महिना जेल सजाय भएको छ । तर उनले दिएको बयानले भने जो कोहिलाई पनि अचम्भित पार्ने खालको छ । उनले छोरीलाई नयाँ श्रीमती सम्झिएर सम्बन्ध राखेको उनले बयान दिएका छन् । केहि घण्टा अगाडी मात्रै विवाह गरेका ती ५० वर्षीय पुरुषले रातको समयमा बलात्कार गरेको थिए । प्रतिनिधिमुलक तस्बीर आफ्नो अत्याधिक रक्सि सेवन गरेको कारण पीडित युवतीलाई आफन्तहरुले दुलही कोठामा सुताइदिएका थिए । आफ्नो खाटमा जाने अवस्थामा नरहेकी ती युवतीलाई पाहुनाहरुले दुलही कोठा सुताउँदा रातको २ बजेर ३० मिनेटको समय थियो । पीडित युवती बिहानको लगभग ४ देखि ५ बजेको समय अन्तरालमा बलात्कृत भएकी थिइन् । एउटै खाटमा नयाँ श्रीमती सम्झिएर आरोपीले छोरीलाई नै बलात्कार गरेको अन्तराष्ट्रिय समाचार पोर्टल मिररमा प्रकाशित छ । आफूलाई त्यस घटनाको खासै याद नभएको र आफू झुक्किएको उनको बयान छ
मोरङ । मोरङको बिराटनगर महानगरपालिका १५ रामजानकी चौकमा शुक्रबार मध्यान्ह अज्ञात बस्तु बिस्फोट हुँदा एक बालकको मृत्यु भएको छ भने एक बालिका गमिभर घाईते भएकी छिन । विराटनगरमा भएको विष्फोटबाट घाइते भएकी राजेश मण्डलकी ८ बर्षिया छोरी राधिकुमारी मण्डलको कोशी अञ्चल अस्पतालमा गम्भिर अबस्थामा उपचार हुँदै । तस्विर पूर्वेली न्यूजबाट । बिस्फोट भएको स्थान नजिकै खेलिरहेका सुवास मण्डलका छोरा ११ बर्षिय अमित मण्डलको उपचारका लागी गोल्डेन अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको छ भने राजेश मण्डलकी ८ बर्षिया छोरी राधिकुमारी मण्डलको कोशी अञ्चल अस्पतालमा गम्भिर अबस्थामा उपचार भईरहेको छ । विस्फोटको प्रतिकात्मक तस्विर । मोरङ प्रहरलिे बिस्फोटको पुष्टि गरेपनि के बिस्फोट भएको भन्ने जनाएको छैन । स्थानीय अनिल मण्डलका अनुसार सो क्षेत्रमा सिलिण्डर बिस्फोट भएको जनाईएको छ । घटनाको अनुसन्धान भईरहेको प्रहरीले जना
अष्ट्रेलियामा अर्का नेपाली युवाको मृत्यु, घर फर्किने क्रममा दुर्घटना
अष्ट्रेलिया । सडक दुर्घटनामा परी चितवन घर भई अष्ट्रेलिया न्यूसाउथवेल्स राज्यको ओलंगनमा बसोबास गर्दै आएका सुजन दाहालको मृत्यु भएको छ । विगत ५ वर्षभन्दा बढीदेखि उनी अष्ट्रेलियामा बस्दै आइरहेका छन् । अष्ट्रेलियामा उनी स्थानीय डोमिनोज पिज्जा सेन्टरमा बिगत चार वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेका थिए । उनले पछिल्लो एक वर्षदेखि एज्ड केयरको काम थालेका थिए । उनी डब्बोको टारीमा रहेको घर फर्किने क्रममा दुर्घटनामा परेका हुन् । प्रिन्सेस हाईवेमा रोकिराखेको लामो मालवाहक ट्रकमा उनको कार ठोक्किन पुगेको थियो । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार ट्रकका चालक भने घाइते भएका छन् । न्यूसाउथवेल्स प्रहरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ,‘ घटना बिहीबार अपरान्ह ५ः३० बजे भएको थियो ।’ दुर्घटनाका कारण सडक केही समय अवरुद्ध पनि भएको थियो । एनआरएन ओसेनिया क्षेत्रीय संयोजक एवं ओलंगोगका बासिन्
विदेशमा रहेका श्रीमानसंग सेक्स भिडियो कल गर्दै धादिंगकी १८ बर्षिय युवती.लिक भएको क्लिप (14,969)
मगर्नी भाउजूको कथा (14,028)
वाइन पिउँदै भाउजु संग बितायाको त्यो रात (11,591)
राजधानीमा अचम्मको बलात्कार – सुन्दा तपाइको होस् उड्छ! (10,076)
जात अनुसार नाक आँखा र फेस फरक भएझै के जात अनुसार महिलाको योनी पनि भिन्न भिन्न हुन्छ ? (8,608)
धादिङको मलेखुबाट नाइट बसमा किचकन्या चढेपछी हंगामा (हेर्नुहोस भिडियो) (8,468)